Home Wararka (Faallo) Rooble & Qoor Qoor waxay hagardaameeyeen Dowladnimada, waxayna geli doonaan baal...
(Faallo) Rooble & Qoor Qoor waxay hagardaameeyeen Dowladnimada, waxayna geli doonaan baal MADOW.
Inkastoo uusan RW Rooble lahayn aftahanimo weyn, haddana laba daqiiqo ayuu jeediyey hadal xaaladda lagu jiro dab ku sii shidaya. Waxaa uu sheegay inaan wax guul ah laga gaarin wahadalaadii ku aadanaa sidii looga gudbi lahaa caqabadaha ay dowladiisu u dhigeyso doorashada.
RW Rooble haddii ay daacad ka tahay inuu dalka doorasho daah furan ka qabto waa inuu yeeshaa geesinimo uu runta ugu sheegayo shacbiga.
Beenta Dowladda ee Tanaasulka ay sheeganeyso
Dhowr jeer ayuu RW Rooble ku celcliyey dowladda waa tanaasushay shacbiga waxay is weydiinayaa maxay ka tanasushay dowladda? Waxau soo codsadeen labada DG ee maqan waa la yaqaanaa oo waa:
In gobolka Gedo loo madaxbanneeyo DG Juballand, lagana soo qaado ciidamada dheeriga ah ee lagu daldalay.
In Xubnaha guddiga doorashada oo ay ku jiraan xubno uu sharciga ka reebayo inay ka mid noqdaan guddiga sida sarakishal NISA iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda laga saaro.
Haddaba R/Wasaaraha shacbiga ha u caddeeyo waxay dowladdiisu ka tanasushay? Sidoo kale MW Qoorqoor oo ay dowladda u wakiilatay inuu warkeeda u qaado DG shacbiga ha u sheego waxa Tanasulka ah ee uu u geeyey DG Jubaland iyo Puntland oo ay soo diideen? Waxaan caqli gal ahayn in guddiigii dhammaa ee doorahsda qaban ahaa aan heshiis lagu ahayn haddana DG lagu dirqinayo inay in Xildhibaanada aqlka sare soo magacaabaan.
Iyadoo ay horay u soo qortay Muqdisho online ayey markale shacbiga u xaqiijinysaa in geedisocdka uu sheegayo RW Rooble uu yahay hab khiyaana ah kaas oo ah in DG loo gudbiyey codsi deg deg ah oo ah inay soo magacaabaan Seneatarada kadibna laga wada halo xubnaha guddiga. Taas oo ay dowladda ugu dan leedahay :
Inay Beesha caalamka u sheegto inay bilaabeen hawlaha doorashada (Election Process).
Inuu yiraahdo MW Farmajo waan sii joogayaa maadaama aan bilaawnay arrimaha doorashada.
Guddoomiye Cumar Finish
Dhinaca kale waxaa shirka qeyb galay Guddomiye Cumar Finish haddaba shacbiga Gobolka Banadir waxay weydiinayaan Gudoomiyaha inuu meel soo saaray 13 xubnood ee ay goalaha shacbiga u ansixiyeen madaxweynahana uu miiska hoostiisa gashaday oo uu diiday inuu saxeeo. MW uu lagau yaqanno ballan ka baxyada joogtada ah waxaa uu diiday inuu saxeexo 13 xildhibaan si barlamankan cusub loogu soo soo daro. Haddaba shacbiga MUqdisho waa inaysan ogolaan inaan lagu dul dhisin barlamaan wakiillo dantooda u doodi karaa aysan ku lahayn. Maraka Cumar Finish ah us heego reer Banadir shirkaas waxa uga soo baxay?
Wuxuu ku socdaa Madaxweyne Farmaajo jidkii Trump uu ku guul dareystay, keeni doontana in bilooyinka soo socdo lagu maxkamadeeyo, iyadoo Fahad oo sidii Guiliani ku kaalmeynaya inuu khaladaadka dastuuriga sii wado. Farmajo haddey bilaabato cidda ugu horreysa ee bartilmaameedka noqoneysaa waa isaga iyo Fahad ee yaan shacbiga Banaadir la gaarsiinin heerkaas, dhuniqaatayaasha la joogaana yeysan been u sheegin.
Maxaa la gudboon RW Rooble
RW Rooble waxaa la gudboon si doorasho wadar ogol ah u dhacdo inuu joojiyo doqonimada derbiyo madax ku dhufashada ah waan in uu:
Saxaa Guddiga oo uu ka saaraa shakhsiyaadka aan sharciga u banneyn ee kala yimid Ciidamada, iyo shaqaalaha Rayidka ee dowladda.
Waa inuu la fadhiistaa mucaaradka dhabta ee awooddooda ay muuqato isagoo u bandhigaya shakhsiyaadka uu ku darayo guddiga cusub ee lagu badalayo kuwa hadda joogaa.
Waa inuu meel saaraa 13 Xildhibaan ee Gobolka Banadir oo ay shacbakooda u soo jeedaan, kuna qancin erayada ma hadlaha iska dabajooga ee Cumar Finish uu u sheegayo.
Waa inuusan qaadin tallaabo lagu sii kala fogaanayo oo uusan wax ku dhisin aragti khadan sida Dowlad goboleedyada aan go’aan qaadan Karin oo uusan ku khasbin inay soo magacaabaan Xildhibaanada aqalka sare.
Murashixiinta waa inaysan ogolaanin in aan hal tuulo iska dhaaf dowlad goboleed laga qaban doorasho keeni karta gacan ka hadal oo aan la isla ogoleyn.
Dowlad Goboleedyada Galmudug, K/Galbeed iyo Hirshabeelle waa inay ka foojignaadaan inay dalka u horseedaan khatar oo degaanadooda maaha kuwa kaligood ay leeyihiin waxaa la leh murashaxiinta, kuwaas oo ay haboon tahay inaan lagu khasbin inay hor istaag ku sameeyaan DG raba inay doorashada u boobaan dembigana la qeybsadaa Farmajo iyo Fahad
Qoddobaada waxay saldhig u noqon karaan haddii uu RW Rooble rabo inuu doorasho qabto. Waayo waxaa caqli darro ah isagoo aan hal shey ka xallinin tabashooyinkii loo soo jeediyey.
RW Rooble ha ogaado waa cunug ku jirka uurka Farmajo oo haddii uu caawa Meesha ka baxaa raacaya oo aan ka hareyn, laakiin wixii wanaag ah ee uu sameystaa uu saameyn ku yeelan doono mustaqbalkiisa siyaasadeed ee dalka.